कोभिड निको भएकाहरूले चिसोबाट बच्न के गर्नुपर्छ? – Nepal Views
कोभिड निको भएकाहरूले चिसोबाट बच्न के गर्नुपर्छ?
‘‘छातीमा संक्रमण भएकाहरूले जथाभावी चिसोमा बाहिर नजाने, बाक्लो न्यानो लुगा लगाउने, धुम्रपान नगर्ने, पोषिलो खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ। समस्या देखिएमा जतिसक्दो चाँडो चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ।”
काठमाडौं। यतिबेला अस्पतालमा कोभिड संक्रमितको संख्या घटेको छ। तर कोभिडको त्रासमा जाँच गराउन आउनेको संख्या भने बढ्दै गएको छ।
चिसो बढ्दै जाँदा छातीको समस्या लिएर आउने बिरामीको संख्या बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। एकपटक संक्रमण भइसकेकाले पुन: कोभिड नै भयो कि भनेर उनीहरू अस्पताल पुग्ने गरेका हुन्।
कोभिडका बिरामी घटे पनि चिसो मौसम शुरु भएसँगै चिसोका कारण समस्या देखिएपछि अस्पतालमा जाँच गराउन आउनेको संख्या बढेको त्रिवि अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन तथा छातीरोग विशेषज्ञ डा. नीरज बमले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानले कोभिडपछि देखिने स्वास्थ्य समस्या (अक्युट कोभिड १९ सिन्ड्रोम)का रूपमा छातीको संक्रमण देखिने बताएका छन्। जसकारण कोभिड निको भएका बिरामीले चिसोमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
चिसोमा सामान्यतया विभिन्न श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याहरू देखिन्छन्। जसमा कोभिड निको भएका बिरामीलाई बढी जोखिम हुने भएकाले विशेष स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्ने छाती रोग विशेषज्ञ डा. बमले बताए। कोभिड भएका धेरै संक्रमितको छातीमा दाग देखिएको र निमोनियाको पनि उच्च जोखिम रहेकाले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने जानकारी उनले दिए।
उनका अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सातामा तीन दिन ओपीडी सेवा सञ्चालन गरिररहेकोमा उक्त तीन दिनमा १५ देखि २० जना कोभिड निको भएका बिरामी चिसोका कारण छातीको समस्या लिएर आउने गरेका छन्। जसकारण एकपटक कोभिड भएकाहरूमा चिसोको जोखिम उच्च भएको उनले बताए।
‘‘अस्पताल आएकामध्ये सास फर्न गाह्रो हुने, थोरै हिँड्दा पनि स्वाँ-स्वाँ हुने, छाती दुख्ने, छाती घ्यार-घ्यार हुने, रुघाखोकी र ज्वरो जस्ता लक्षणहरु लिएर आइरहेका छन्”, उनले भने। चिसोको समयमा सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘‘छातीमा संक्रमण भएकाहरूले जथाभावी चिसोमा बाहिर नजाने, बाक्लो न्यानो लुगा लगाउने, धुम्रपान नगर्ने, पोषिलो खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ। समस्या देखिएमा जतिसक्दो चाँडो चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ।” कोभिड हुँदा निमोनिया भएकामा पछिसम्म दाग हुने बताउँदै उनले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कम हुने भएकाले चिसोमा जोखिम बढी हुने बताए।
यस्तै टेकू अस्पतालमा पनि पोस्ट कोभिडको समस्या लिएर आउनेको संख्या बढेको अस्पतालले बताएको छ। टेकू अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले कोभिडले फोक्सोलाई बढी प्रभाव पार्ने र चिसोमा त्यस्ता व्यक्तिमा जोखिमको सम्भावना हुने बताए।
तर हालसम्म सरकारले कोभिडपछि स्वास्थ्यमा कस्ता असर देखिन सक्छन् भन्ने कुनै पनि अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। जसकारण पोस्ट कोभिडका कारण यस्तै समस्या देखिन सक्छन् भनेर भन्न नसकिने डा. पुनले बताए। ‘‘गत जुलाईदेखि नै पोस्ट कोभिडका बिरामी अस्पतालमा आइरहेका छन्,” उनले भने, ‘‘चिसो शुरु भएकाले छातीको समस्या लिएर आउनेको संख्या विस्तारै बढ्छ होला।”
उनका अनुसार पोस्ट कोभिडका कारण सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाँ-स्वाँ हुने, निद्रा नपर्ने, मुटुको धडकन बढ्ने, खोकी लाग्ने, धेरै थकाइ लाग्ने हुन्छ भने केहीमा डिप्रेसनको समस्या पनि देखिन सक्छ।
२०७८ मंसिर ८ गते ७:१३